Motorola Moto One: Tilmaamaha, Qiimaha iyo Daahfurka | Androidsis
Motorola Moto One: Nooca ugu horreeya ee Android One
Waan la soconay xogo badan oo ku saabsan Motorola Moto One, Taleefankii ugu horreeyay ee shirkaddu u adeegsato Android One nidaam qalliin. Ugu dambeyntiina, maalintan bilowga ah ee IFA 2018, aaladda ayaa si rasmi ah loo soo bandhigay. Qeexitaannadiisa iyo naqshaddiisa waa la soo daadiyey, haddana waa waqtigii la hubin lahaa inay saxsan yihiin iyo in kale.
Motorola Moto One waxaa loo soo bandhigay sidii taleefan dhexdhexaad ah. Waxaan u tixgelin karnaa inay tahay tartame taleefannada sida Xiaomi Mi A2 iyo A2 Lite. Marka waxaad ku leedahay qaar ka mid ah tartamayaasha adag ee suuqa. Laakiin Motorola waa shirkad ay macaamiishu jecelyihiin.
Sidaa darteed, waxaan la kulannaa taleefan fuliya hadafkiisa, oo leh naqshad hadda jirta iyo in ka badan qeexitaanno la aqbali karo. Sidee u daatay taleefanka ayaa dooranaya shaashad leh qaanuun, isagoo si cad u sheegaya inay u timid inay sii joogto suuqa.
1 Tilmaamaha Motorola Moto One
Tilmaamaha Motorola Moto One
Waxa layaabka leh ee ku saabsan Motorola Moto One waa taa waxay doorteen naqshad leh jir quraarad leh. Tan iyo inta badan tani waa wax loo qoondeeyay dhamaadka sare. Laakiin shirkaddu waxay rabtaa naqshad tayo leh, oo ah wax ka muuqda taleefankan. Kuwani waa qeexitaankiisa buuxa:
Screen: LTPS IPS 5,9 inji oo leh HD + xallinta (1520 x 720 inji) iyo saamiga 19: 9
GacaliyeQalabka: Qualcomm Snapdragon 625
Kaydinta Gudaha: 64 GB (Lagu ballaarin karo microSD)
Cámara trasera: 13 + 2 MP oo leh f / 2.0 aperture, LED Flash iyo 4k video @ 30fps
Kaameerada hore: 8 MP oo leh aperture f / 2.2 iyo LED flash
Batariga: 3.000 mAh + Turbopower
Nidaamka hawlgalka: Android 8.1 Oreo One Edition
Cabbirada: 150 x 72 x 7.97 mm
Xuduudaha kala duwan: Bluetooth 4.2, WiFi 802.11n, GPS / GLONASS / Galileo, USB Type-C
kuwa kale: NFC, iska caabin P2i, dareeraha faraha, RadioFM
Waxaan arki karnaa in qayb weyn oo ka mid ah noocyada tusaalahan horay loogu soo daadiyay. Motorola waxay dooratay darajada, sida noocyo kale oo badan, oo ah hab lagu hagaajiyo cabbirka shaashadda qalabka. Waxa ugu yaabka badan ama niyadjabka lihi waa xulashada processor-ka qalabka.
Snapdragon 625 waa processor wanaagsan, oo si fiican u shaqeeya, laakiin suuqa ku jiray in muddo ah. Xitaa Qualcomm lafteeda ayaa soo bandhigtay xulashooyin cusub oo dhexdooda ah, taas oo siin karta xitaa waxqabad wanaagsan. Marka waa wax yar "laakiin" taasi waa in lagu dhejiyaa Motorola Moto One. Inkastoo aysan saameyn ku yeelan waxqabadka qalabka.
Muuqaal kale oo soo saari doona faallooyin ku saabsan qalabka waa batteriga. Waxaa qayb ahaan layaab leh in awooddiisu tahay 3.000 mAh, taas oo xoogaa ku yar dad badan. In kasta oo shirkaddu dammaanad-qaadayso madax-bannaanida ku filan ee ay ku isticmaali karto taleefanka maalinta oo dhan. Waxay sidoo kale la socotaa lacag-siinta degdegga ah iyadoo loo mahadcelinayo tiknoolajiyada Turbopower, Mahadsanid taas oo ay suurtagal noqon doonto in lix saacadood oo ismaamul ah lagu helo 20 daqiiqo.
Xaqiiqda ah in Motorola Moto One uu u adeegsado Android One sida nidaamka hawlgalka macnaheedu waa taas noqon doonaa mid ka mid ah taleefannada ugu horreeya ee hela cusbooneysiinta Android 9.0 Pie waqtiga la bilaabay. Marka lagu daro helitaanka cusboonaysiinta amniga badanaa. Xaaladdan oo kale, waxay noqon doonaan bil kasta balastar loogu talagalay dadka isticmaala. Waqtigan xaadirka ah lama oga goorta cusboonaysiintaani ku imaan doonto taleefanka.
Xaaladdan oo kale, waxaan wajahaynaa hal nooc oo ah taleefankii ugu horreeyay ee Motorola oo wata Android One. Nooc leh 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd gudaha ah. Kaliya hal midab ayaa lagu sheegay kaas oo qaabkan laga heli doono, kaas oo sida aad ku arki karto sawirada, uu yahay madow. In kasta oo la filayo inay midabbo badan yeelan doonaan, in kasta oo aan waxna la xaqiijin.
Majirto taariikho cayiman oo laxiriira bilaabitaankeeda. Motorola Moto One ayaa la sheegay inuu ku dhufan doono wadamada Yurub, Latin America, iyo Asia bilaha soo socda. Marka waxaa lafilayaa in dayrta / jiilaalka la heli karo hada. Waxay ku sameyn doontaa qiime dhan 299 euro, taas oo aan fiicnayn marka la fiiriyo qormooyinkeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola Moto One: Nooca ugu horreeya ee Android One
Casio Pro Trek WSD-F30: Smartwatch-ka loogu talagalay xiisaha
Sharaf Magic 2: dhamaadka sare ee sharaf waa la cusbooneysiiyay